Wakambofunga nezve kushandura chitandadzo chako kuita bhizinesi? | Bezzia
Maria vazquez | 12/01/2022 10:00 | Kufarira
Wakambofunga kugadzira a bhizinesi rakatenderedza chitandadzo kugadzira kana unyanzvi? Tine chokwadi chekuti vazhinji venyu munenge mafunga nezvazvo asi gare gare munenge manzwa kutya kusvetuka, takanganisa here? Nhasi, chinangwa chedu ndechekuti iwe uutore semukana wekuwana imwe mari nezvaunoda kuita zvakanyanya.
Uri shasha pakupenda, kusona, kugadzira matehwe, kugadzira hari, kuruka, kana kutora mifananidzo here? Kukwidza kune yakasarudzika uye yechokwadi chinhu nhasi chirevo chekuti kuburikidza ne pasocial network inogona kukubatsira kuita mari pane yako hobby. Kune mabhizimisi akawanda ane purofiti akazvarwa nenzira iyi, asi haisati iri nyaya yetarenda nerombo; shure kune nguva dzose a kuronga, kudzidziswa uye basa. Iwe unoda kuziva makiyi ekushandura hobby yako kuita bhizinesi? Tinoagoverana newe nhasi
1 Ita chirongwa
2 rione ibasa
3 Dzidzisai uye mubvunze
4 Ita kuti basa rako rizivikanwe
5 Gadzira mibatanidzwa uye nzira itsva
Kushandura pfungwa kuita mukana kunoda chirongwa. Y kugadzira hurongwa Mumwe anofanirwa kuzvibvunza mibvunzo mishoma: Ndine midziyo yakakodzera yekushandura basa rangu kuita bhizinesi? Zvinogoneka mune zveupfumi here? Chii chandinoda kutengesa uye kuna ani?
Kunakidzwa nebasa rekugadzira uye kuita raramo kubva mairi zvinhu zvakasiyana kwazvo. Kuti uwane hupenyu kubva pairi kupfuura basa raunoita, iwe uchafanirwa kuvaka vateereri uye shandura chido chako kuva basa. Kana kuti chii chakafanana kugadzirisa hobby yako kune yakaoma nyika yebhizinesi uye ichi hachisi chinhu chinowanikwa mumazuva maviri.
Kufunga izvi kwakakosha ronga zano Kubva pakutanga. Iro zano rinozoshanda segwara mukati mematanho ekutanga, akanyanya kuoma! uchigara uchifunga kuti izvi zvinoda kugadziriswa paunenge uchifambira mberi. Kana iwe uchitya njodzi, tanga wafunga nezve zano rinokutendera iwe kuti uwane raramo nekushanda chikamu-nguva kune vamwe uye kutsaurira imwe hafu kune chako chaunofarira. Pachava nenguva yekuenderera mberi.
Kana uchida kuwana mari unofanira kutanga funga chitandadzo chako sebasa. Ndokunge, iwe uchafanirwa kuisa pamberi uye kuronga svondo rega rega zvichibva kwete chete pamapurojekiti aunofanirwa kuendesa asiwo pane iwo ekuwedzera mabasa anosanganisira kuve muzvinabhizimusi.
Kutanga bhizinesi kubva pane zvatinofarira isu zvinokurudzira, asi kuzvimiririra uye kuzvivimba iwe pachako anotakura nhevedzano yemitoro. Iwe unozoda nguva yekudzidzisa, kugadzira, kubata nevatengi vako uye kubata iyo tekinoroji chikamu chebhizinesi. Uye hongu, ajenda kuitira kuti usakanganwa chero chinhu.
Dzidzisai uye mubvunze
Iwe unogona kunge wapedza makore akazvipira kune iyo yekuzvivaraidza iwe yauri kufunga kuita bhizinesi. Uye isu hatipokane kuti unenge wawana mumakore apfuura ruzivo rwakakuita kuti uvandudze, asi kana iwe usina zvakare. bhizinesi manejimendi ruzivo zvichakuomera iwe kuti bhizinesi riende.
Kudzidzisa kwakakosha. Tora kosi yekushambadzira online uye kutengeserana, accounting uye networking kuti uwane nzira yekuwana zvakanyanya kubva mazviri. Uye taura nevashandi vari muchikamu chimwe chete kana masangano emabhizinesi vanogona kukuraira nekukutsigira muprojekiti yako. Taura nedzimwe nyanzvi Kuti vakatanga nzira imwe chete yawakatanga makore apfuura kazhinji inovhenekera. Uye ndezvekuti vakatodzidza kubva pane zvakaipa uye zvisarudzo zvakanaka, kukanganisa uye kubudirira.
Ita kuti basa rako rizivikanwe
Nhasi, kuve nekuvapo online kwakakosha. Masocial network ndicho chishandiso chakakosha kusvika kune chaunovavarira kana chinangwa chevateereri. Asi kuti umire mavari uchada gadzira chiratidzo senyanzvi, mutsara wakajeka uyo vashandisi vanokuzivisa iwe uye unokuita kuti umire kubva mumakwikwi.
Mune network, kunyanya pa Instagram, iyi brand dhizaini inova yakakosha. Asi usangoisa zvigadzirwa mafoto; Vanogona vatengi vanonzwira tsitsi nebasa rako nekukurumidza kana iwe ukavabvumira kuti vaone mashandiro aunoita, ndeapi maturusi aunoshandisa kana izvo zvaunotora kurudziro kubva; divi rako pachako.
Funga kuti pamusoro pekuita mari neizvo zvigadzirwa zvaunogadzira, iwe unogona mune ramangwana kupa zvishandiso nemakiyi kuitira kuti mushandisi adzidze kugadzira zvisikwa zvake. Ingava nzira yekusiyanisa basa rako kana wakwanisa kuzviitira gomba.
Gadzira mibatanidzwa uye nzira itsva
Chero zvaunoita, pachagara paine mumwe munhu anogovera chiono chako chehunyanzvi. Kuzvitsvaga uye kugadzira ma synergies kunogona kubatsira mukukura kwebhizinesi rako. Kudyidzana Vese vaine mamwe maprofile mumanetwork uye ane akasarudzika zvinyorwa, ivo vanogara vari shamwari huru.
Izvo zvakare zvichakubatsira iwe kushandura hobby yako kuita bhizinesi kugadzira nzira itsva kana zvishandiso zvechigadzirwa chako zvinokusiyanisa kubva kumakwikwi. Paunenge uchitanga chero bhizinesi, zvakakosha kuti utarise pakusiyanisa.
Wakambofunga kushandura hobby yako kuita bhizinesi? Hop up! Kana chisiri chinhu chinoda mari yekutanga mari, edza! Kana iwe ukafunga nezvazvo zvakanyanya, unozozvipotsa zvakare. PaBezzia tinovimbisa kuwedzera mamwe eaya mapoinzi munguva pfupi iri kutevera nemamwe maturusi uye ruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Kufarira » Wakambofunga nezve kushandura chitandadzo chako kuita bhizinesi?
Masks ekugadzirisa ziso reziso